China Umakhi weBulldozer wase China kunye noMthengisi | Shehwa
I-SD5K luhlobo lwethrekhi yebhulldozer iyonke enqunyanyiswe ngokungagungqiyo, inqanaba lolawulo lombane, iisekethe ezimbini zolawulo lwenkqubo yokuqhuba ngesixhobo esisebenza ngemoto, ulawulo lombane oluvaliweyo kwiziko lomthwalo wokuthumela inkqubo ye-hydraulic.
I-SD5K luhlobo lwethrekhi yebhulldozer iyonke enqunyanyiswe ngokungagungqiyo, inqanaba lolawulo lombane, iisekethe ezimbini zolawulo lwenkqubo yokuqhuba ngesixhobo esisebenza ngemoto, ulawulo lombane oluvaliweyo kwiziko lomthwalo wokuthumela inkqubo ye-hydraulic. I-PowerAngle-Tilting blade, ulawulo oluzenzekelayo lwenkqubo yokupholisa ezimeleyo. Le modeli ixhotyiswe ngombane ombane olawulwa yipateni epheleleyo yokuhambelana kwamandla, kunye nokuhambisa okungaguquguqukiyo kunye nokusebenza kwepivot, uyilo lweemodyuli kunye nokulula ukulungisa kunye nokugcina; inkqubo yokuhamba ngokulinganayo kwe-electro-hydraulic kunye nesixhobo somsebenzi senza ukusebenza ngokuchanekileyo kwaye kube lula; Ukudibana kwesixhobo somntu kunye nekhompyuter, inkqubo yenkonzo ekrelekrele, itywina lomoya elitywinwe ngokupheleleyo. Inokuxhotyiswa ngamanqatha amathathu. Ngumatshini ofanelekileyo osetyenzisiweyo ngokugqibeleleyo okanye umthwalo onzima osebenzayo njengokwakha izibuko, ulwakhiwo lonxibelelwano, ibala lezemidlalo, iprojekthi yamandla ombane, isixeko nedolophu umhlaba ohambayo, ukubuyisela umva umfuziselo kunye nokusebenza kokulinganisa.
Dozer: PAT (Amandla e-Angle Tilting Blade)
Ubunzima bokusebenza (kubandakanya i-ripper) (Kg): 13100
Uxinzelelo lomhlaba (kubandakanya i-ripper) (KPa): 45
Umkhondo wendlela (mm): 1790
Min. ukucoca umhlaba (mm): 315
Umthamo wokubamba (m): 3.1
Ubukhulu. ukumba ubunzulu (mm): 460
Imilinganiselo iyonke (mm): 492230603000
Ukulinganiswa kweenguqu (rpm): 2200
Amandla eFlywheel (KW / HP): 97/132
Ubukhulu. torque (NM / ngomzuzu): 570/1450
Ikaliwe ukusetyenziswa kwepetroli (g / KWh): 190
Uhlobo: Uhlobo lwengoma yesiqhelo olunqunyanyisiweyo
Inani leevili zokuhambisa (kwicala ngalinye): 1
Ukuphakama (mm): 190
Ngasemva (Km / h) 0-10.5
Ubukhulu. uxinzelelo lwenkqubo (MPa): 19
Uhlobo lwempompo: Impompo yepiston yokufuduka eguqukayo
Imveliso yenkquboL / min: 125
Imijikelezo emibini yolawulo lwe-hydrostatic system
Uhlobo emanzi waqhekeza idiski ezininzi
Modularize Inqanaba elinye leplanethi + Inqanaba elinye lokunciphisa izixhobo
Isandla sokuyalela-isibane sombane
Inkqubo yenkonzo ekrelekrele
Egqithileyo I-SD7K ye-LGP Bulldozer
Okulandelayo: I-SD6K Bulldozer
I-SD7K ye-LGP Bulldozer